El Guerrero del Antifaz, iyo comic yakateedzana naManuel Gago García | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Comics, Vanyori, Type, Literature, Nyaya
Warrior neMask akateedzana enhau dzeSpanish dzakagadzirwa naManuel Gago García. Pakutanga rakaburitswa naWedhiyo Valenciana pakati pa1944 na1966 pasina kukanganisa. Rudzi rwekuburitswa kwemavara rwakaburitswa muma1970s uye mashoma mashoma mamwe makore mumakore akatevera.
Iyo yakarongedzwa mukati meye chiito comics genre uye yayo yepakati nharo ihondo dzakarwiwa naAdolfo de Moncada, knight yakasimudzwa namambo wechiMuslim anonzi Ali Khan. Mushure mekuona kwaakabva chaiko, Moncada anotendeukira muchiKaturike uye anorwisa varwi vechiMuslim muzana ramakore regumi neshanu Spain.
1 Katuni inozivikanwa kwazvo
2.1 Muverengi wenguva dzose
2.2 Munyori ane hunyanzvi
2.4 Kugadzira nemasikirwo
3 Nhoroondo yeReconquista
3.1 Chiito se protagonist
4 Kufuridzirwa kwenhoroondo uye kunyora
5.1 Adolf weMoncada
5.5 Kaputeni Rodolfo
Katuni inozivikanwa kwazvo
Iyo ndeimwe yeanonyanya kufarirwa uye asingasviki ma comics eiyo XNUMXth century Spanish comic, inonziwo "tebeo". Chinyorwa chekutanga chaive nemabhuku ezvinyorwa mazana matanhatu mazana masere neshanu, aine makopi anosvika mazana masere ezviuru. Ndiyo wechipiri Spanish comic strip ine yakanyanya kudhindwa yenguva yayo, kumashure chete Roberto Alcázar naPedrín.
Munguva pfupi yapfuura, muna 2016, muunganidzwa mutsva wemakomiki wakadaidzwa Warrior neMask. Nyaya hadzina kubvira dzataurwa, nemufananidzo wekatuni Miquel Quesada Ramos uye chinyorwa naJosé Ramírez.
Manuel Gago García akaberekerwa muValladolid, Spain, muna Kurume 7, 1925. Munguva yehudiki hwake uye mushure mekusungwa kwababa vake nekuda kwezvikonzero zvine chekuita neSpanish Civil War, mhuri yake yakatamira kuAlbacete. Ikoko Manuel Gago akashanda mumuchina wemakanika kusvikira tibhii yamubvisa pabasa rezvemuviri kwenguva yakareba aine makore gumi nematanhatu.
Muverengi wenguva dzose
Akanga ari muverengi anoshingairira evatambi vemauto eAmerica uye kubva pazera diki kwazvo akatumira mamwe emabasa ake kune vaparidzi vakasiyana muBarcelona neValencia. Basa rake rekutanga rakakodzera semuartoon aive Mhiko inoera uye Viriatus, rakabudiswa muna 1943 naWedhiyo Valenciana.
Iyi comic ndiyo yakafanotungamira yeiro raive basa rakabudirira kwazvo uye rakakurumbira remunyori: Warrior neMask. Iyo yekupedzisira yakatanga kuburitswa muna 1944, uye mukugadzira kwayo akave nerubatsiro rwemunin'ina wake Pablo Gago uye munyori wezvekudyidzana Pedro Quesada Cerdán, uyo aizove mukuwasha wake.
Munyori ane hunyanzvi
Mukuwedzera kune Warrior neMask y Mhiko inoera uye Viriatus, panguva yehudiki hwake akaburitsa nekuburitsa mamwe mazita, pakati padzo kumira Chikwata chevanomwe y Murwi mudiki. Iyo yekupedzisira yakawana budiriro yakati rebei, ichiburitswa kwemakore gumi nerimwe anoteedzana (1945 - 1956).
Muna 1946 akasimbisa imba yake yekugara muValencia, kwaakanobatana neValencian Chikoro cheMakomiki. ndokutora frenetic kumhanya kwebasa hunhu hweiyi. Akatanga kushambadzira mamwe maseketi vhiki nevhiki, senge Iye Iron Swordsman y Purk, murume wedombo, kutanga kune vaparidzi vakasiyana uyezve, kwenguva pfupi, chete yeVanyoreri Valenciana.
Muna 1948 akaroora Teresa Quesada Cerdán. Vana vashanu vakazvarwa kubva kumuchato. Makore akati gare gare, pamwe nababa vake nehama, akavamba Edhisheni Garga, kambani yakakurumidza kukundikana. Muna 1951 vakagadzira Edhisheni Maga, iyo yakaburitsa mabasa aManuel, Pablo nevamwe vanyori vemifananidzo uye vanyori vekunyora kusvikira 1986.
Munguva yehupenyu hwake hwese Manuel Gago García akaburitsa macomics panguva imwe chete kune Edhisheni Valenciana, Edhisheni Maga nedzimwe dzimba dzekutsikisa dzakadai seBruguera, muBarcelona. Akanga ari muartistist ane hunyanzvi uye mumwe weanonyanya kuzivikanwa wenguva yegoridhe yevatambi. Akaburitsa anodarika 27.000 mapeji ekunyora kwake.
Kwedzimwe nguva akashanda pamapurojekiti anodarika mashanu panguva imwe chete, ndosaka dzimwe nguva aikoshesa chiito kukuvadza kudhirowa. Izvi zvinoratidzwa, semuenzaniso, mune zvisirizvo zviripo mari yenhamba zhinji dze Warrior neMask.
Akafa nguva isati yakwana muna Zvita 29, 1980 nekuda kwekunetseka kwechiropa., aive nemakore makumi mashanu nemashanu. Panguva yekufa kwake aive achishanda pakudzokororazve ruvara rwe Iyo Nyowani Adventures yeMask Warrior, iyo yakatanga kubudiswa muma70.
Warrior neMask Iyo yakagadzwa muSpain, munguva dzemadzimambo eKaturike. Iyo protagonist, Adolfo de Moncada, ndiye mwanakomana weCountess weRoca, uyo panguva yepamuviri pake akabiwa naMambo wechiMuslim Ali Kan. Adolfo akakura semwanakomana wamambo wechiMuslim, asi paakasvika pakukura amai vake vanoratidza kwaakabva chaiko, mushure mezvo akaurayiwa naAli Khan uye Adolfo anotiza. Kuzviwana isu neakateedzana enyambo kwakafanana nekusangana ne Don Quixote yevana.
Achitevera misadventures yakawanda kudaro, anotendeukira muchiKaturike uye anotanga muhondo sechiuto chechiKristu vachipesana nevaMuslim avo vachiri mundima yeSpain mukurwira kutora Al-Andalus.
Chiito se protagonist
Iyo katuni inoratidzirwa neayo akasimba rondedzero ine cinematic maitiro. Kuwanda kwezvikamu uye zvechipiri mavara kunosimudzira iyo huru nyaya uye nekupa nuances nezvekuti ndevapi vakomana vakanaka uye vakaipa kudivi rega (maMuslim nemaKristu).
Haisi ingori nyaya yezvakanaka kana zvakaipa. Iye protagonist iye amene anowanzo kubvaruka pakati peakakazvarwa mavambo uye ake echiMuslim kurerwa uye nhaka. Kune anonakidza uye anoshamisa akazvimirira echikadzi mavara, achifunga mamiriro uye nguva yakanyorwa comic. Zvakare villains vane kurudziro dzakasiyana uye yavo nyaya.
Chiito ichi chinoitika kunyanya munzvimbo yeIberia, zvisinei, munhamba dzinotevera zvinoitika muTurkey, Italy, Algeria, Tunisia uye mamwe marongero.
Kufuridzirwa kwenhoroondo uye kunyora
Para Warrior neMask, Manuel Gago akatora sebhuku renhoroondo naRafael Pérez y Pérez, Mazana ma Knights aIsabel la Católica, iyo inotaura nyaya uye kunetsana kwenhengo dzevamiriri veumambo munguva idzodzo.
Kana iri yemhando yekurondedzera, yakafemerwa neValencian Chikoro uye American gamba ma comics. Iyo huru rangano iri mukati meakakosha nhoroondo yezvakaitika mukati meiyo nhoroondo yeSpain: iyo Nguva yeReconquest
Iye ndiye protagonist mukuru wenyaya. Mhare yakasimudzwa semuchinda wechiMuslim, uyo anotendeukira kuchiKaturike kana awana mavambo ake echokwadi. Iye akashinga uye akasimba. Pfeka chifukidzo kuti varege kuwana yako yapfuura yeArabhu.
Ndiye baba vekurera ve protagonist uye mukuru villain akateedzana. Anouraya amai vaAdolfo uye anokuvadzwa naye paanenge achimhanya. Inomudzingirira panguva dzakasiyana mumusaruro.
Iye ndiye anodikanwa we protagonist. Akashinga uye ane moyo wakanakaIye ndiye mwanasikana waCount Torres uye pakupedzisira anoroora Adolfo mukabhuku kanhamba 362.
Pakutanga ndiye mudiwa waAli Kan, anobva adanana naAdolfo. Iye muenzaniso wemukadzi akasimba uye akazvimirira.
Knight mukushanda kwa Count Count Torres. Iye anopokana anodzokorodza munyaya mushure mekufa kwemukoma wake mumaoko aAdolfo, uyo akamutora semurwi wechiMuslim.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Murwi ane mask